Dawlado iyo Daaro Xaaraana!
Ali Shire Jama
Inta la xasuusto taariikhda bini’aadamka lama hayo mar dhaca iyo xatooyadu ay sharci ahaayeen. Dhamaan dhaqamada aan diimaha ku saleysneyn iyo kuwa ku dhisan labaduba waxay ka mideysan yihiin la dagaalanka arrimahaas foosha xun noocyadooda kala gadisan. Mushtamac burcadnimo u godoomay waxaa la og yahay dadkii loo yaqiin ”Viking” ee ku noolaa koonfurta Raashiya iyo wadamada ku yaal waqooyiga Yurub oo kala ah Finland, Sweden, Danmark iyo Island. Ummadaas waxay ahaayeen kuwa adduunka ku gilgiley dhac iyo dil joogaa, waxaana caado u ahayd in aysan shaqaysan ee ku noolaadaan xoolo ay soo dhaceen. Waxaa taas ka darnaa iyaga oo xasuuqi jirey dhamman dadka ay hantidoodii ka soo dhaceen. Waxaa sawir wanaagsan ka bixiyey dhaqamadii Viking filmka “thirteen warior ”.
Qofkasta oo adduunka ku nool kolka uu maqlo dhac iyo xatooyo waxuu dareemayaa in wax xun dhagahiisa ku dhaceen, xataa haddii qofkaas isaga laftiisu tuug yahay. Marna adduunka lagama sifeyn karo dhaca iyo tuugnimada, laakiin waxaad moodaa in aan aad loola dagaalamin arrinkaas, waayo waxaa maanta dunida ka socda in wadamadii iyagu adduunka ugu dhaqaalaha badnaa qaarkood ku hadiidayaan dhac iyo xatooyo.
Dhanka soomaalida iyo burcadnimadu waa mid waligeed soo taxnayd ha kala xoog badnaatee. Waayihii hore waxaa ugu badnaa burcadnimda soomaalida geel la kala dhaco oo qaab qabiil ku saleysnaa, laakiin waxaa taas wax ka badaley Sayid Maxamed Abdille Xassan oo qaab aan horey loo aqoon ku soo kordhiyey dhaca ummada loo geysto, qaabkaas oo ahaa in urur burcadnimo ku dhisan lagu mooraduugey soomaalida. Burcadnimadii Siyadka waxaa ku xigey tii Siyaad Barre uu kula wareegey hantidii qabiilada soomaaliyeed qaarkood.
Kolka laga soo gudbo dhacii ay sameeyeen Sayidkii iyo Siyaad Barre ayaa waxaa waayahaan danbe soo ifbaxay dhac iyo xatooyo kolkii la arkay Sayidkii iyo Siyaad loo duceeyo. Koonfurta Soomaaliya ayaa hantida looga nool yahay waxaa lagu qiyaasaa in boqolkii sagaashan ay booli tahay, laakiin waxaa la yaab leh in daaraha, dhulka iyo beeraha xaaraantaa ee koofurta kaliya la sheego, ee aan dhulka Soomaaliya intiisa kale ee boolida looga nool yahay aan marna la soo qaadin, taasna waxaad moodaa in ay xaqdaro tahay, waayo kolka wax laga qorayo waxii dal ka dhacay maahan in qaar la qariyo qaybna la buunbuuniyo. Somaliland ayaa ah meesha labaad ee soo raacda koonfurta Soomaaliya markii dhaca iyo xasuuqa laga hadlayo. Markii SNM soo gashay Hargeysa, Burco iyo Barbara ayey waxii aan ahayn reer SNM dhagta dhiiga u dareen, ka dibna la wareegeen waxii hanti ahaa ee dadkii kale oo soomaaliyeed lahaayeen. Reer SNM waxay kale gabi ahaanba qaateen beerihii ku yiil koonfurta Sanaag. Haddaba waxaa nasiibdaraa in caqlixumda soomaalidu u ceeb qarisey burcadnimda reer soomaaliland, ceebaha koonfurtana makhaadaha looga sheekeysto. ”Mushtamaca qaar ka mid ah waa qaadan karaan xoolo booli ah haddii ay Ilaahay ka furteen, laakiin ummad dhan meeshii laga xukumayey in ay booli noqoto ayaa ah mid lala yaabo.” Waxaan cidna ka dahsooneyn in Somaliland laga xukumo daartii general Maxamed Saciid Xirsi ”Morgan” uu reekiisa u dhistay. ”Haweenku kama fasaqan karaan nimankooda inta ay xoolohooda ku intifaacayaan, iyaga oo ku marmarsiyoonaya masruuf la’aan, waana arrin xadgud ku ah sharciga diinta islaamka.” Taas waxaa la mid ah in Somaliland ku andacoodaan in ay dacwad u qabnaan general ”Morgan”, laakiin waxay moog yihiin in ay manaafacsadaan daartiisii oo uusan waqaf uga dhigin dadka reer Somaliland.
Haddaba waxaa halkaas ka cad in ummad iyagu danbi faraha kula jiraa ay cid kale danbiyo ku soo ogaan. Waxaan ku soo gaabineynaa qoraalkaan yar in loo cadaalad falo waxii ka dhacay Soomaaliya, waxaan kale oo leenahay koonfurta Soomaaliya cidna kama fakarto maamul iyo daaro madaxtooyo, ee qofkasta waxii gacantiisa soo gala ayuu duurka la xulaa, laakiin maamulka Somaliland ka dhisan ayaa laga xukumaa daar xaaraan ah.
» Soomaalida iyo Suleymaan! [Cali Shire]